पुनः बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित – Sajha Bisaunee
पुनः बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित
साझा बिसौनी संवाददाता । २० श्रावण २०७७, मंगलवार ०६:०२ मा प्रकाशित
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । सोमवार मात्रै थप चार सय १८ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
देशभरका प्रयोगशालामा सात हजार ६ सय ३७ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । योसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २० हजार सात सय ५० पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
संक्रमित बढ्दै गए पनि संक्रमणमुक्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । सोमवार कोरोनामुक्त हुनेको संख्या तीन सय ५८ रहेको छ । योसँगै हालसम्म १४ हजार नौ सय ६१ जना कोरोनाबाट निको भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा आठ सय ७५, प्रदेश नम्बर २ मा तीन हजार एक सय ७६, बागमती प्रदेशमा पाँच सय ४३ र गण्डकी प्रदेशमा एक हजार तीन सय ३० जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ मा चार हजार ६६, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार सात सय २३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन हजार दुई सय ४८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । सोमवार देशभरीका आइसोलेसनमा पाँच हजार सात सय ३२ जना संक्रमित उपचाररत छन् । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा दुई सय ९०, प्रदेश नम्बर २ मा दुई हजार तीन सय ५७, बागमती प्रदेशमा ६ सय ५१ र गण्डकी प्रदेशमा दुई सय ७२ जना संक्रमित उपचाररत छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ मा तीन सय १५, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार पाँच सय ४९ जना रहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा एक हजार दुई सय ९६, प्रदेश नम्बर २ मा एक हजार एक सय ४४, बागमती प्रदेशमा आठ सय २६ र गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार सात सय ९५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा एक हजार तीन सय ४०, कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय ३७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । अहिलेसम्म कोरोनाबाट ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा सोमवार थप ६ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । प्रदेश अस्पताल÷पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–४ र ८ का एक÷एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
दैलेख अस्पतालस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नारायण नगरपालिका–१ र २ का एक/एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । रूकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मुसिकोट नगरपालिका–१ र ६ का एक/एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. लक्ष्मी नारायण तिवारीले जानकारी दिए ।